Sat, Feb 27, 2021 | 16:10:33 NST
दुई वर्षमा रेल चल्ला त ? यस्तो छ अवस्था...
काठमाडौं, चैत १२ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्रमा रेल कुदाउने घोषणा गरेपछि नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने विषय फेरि बहसमा आएको छ ।
ओली भारत जानुअघि नै पार्टी एकता गर्न यस्तो छ एमाले र माओवादीको तयारी
एमाले–माओवादी पार्टी एकता प्रक्रियाले छिट्टै मूर्त रुप लिने भएको छ । एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण अगाडि नै एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउन अग्रसर भएपछि पार्टी एकीकरण छिट्टै हुन लागेको हो ।
फलाम कुटेरै मासिक एक लाख आम्दानी, तीन जनालाई रोजगार
चार कुनामा उभ्याइएका फलामका डण्डी । त्यसैमाथि हालिएको जस्ताको छानो, अस्थायी टहरा । भाडाकुँडा बनाउन राखिएका फलामका चाङ । फलाम तथा तामाको भाँडाकुँडा बनाउदै गरेका कालिगढहरु ।
कर्णाली प्रदेशको जटिल विकासे रहर, अब जनार्दनकै भर !
पार्टी कार्यकर्ताको वरिपरी घुम्नुभन्दा नागरिकका प्रत्यक्ष जीवनशैली नै परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्ने रुचाउने जनार्दन शर्मासँग कर्णाली प्रदेशका हरेक क्षेत्रको विषयमा राम्रो अनुभव छ ।
भीआइपीको घरमा कामदार बनेका सुरक्षाकर्मीको खोजी हुँदै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीएसओ सेवाको दुरुपयोग भएको भन्दै फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्रालयले छानबीन सुरु गरेको छ ।
चापागाउँको सडक अस्तव्यस्त
ललितपुर, चैत्र ९ – चापागाउँ–टुटेपानी सडकखण्ड निर्माण कार्यमा ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै स्थानीयबासिन्दाले यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् । स्थानीयबासिन्दाको अवरोधपछि चापागाउँ दोबाटो हुँदै चल्ने गाडी सातदोबाटो हुँदै धापाखेलबाट सन्चालन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको ‘एक्सन’पछि मन्त्रीहरुको ‘रियाक्सन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैको दबाबमा नपरी जवाफदेही ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रीहरुको दौडधूप बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रीहरु सम्बन्धित मन्त्रालयको भावी योजना अध्ययन र अनुगमनमा लागेका छन् ।
स्वेच्छिक अवकाश विवाद : मन्त्री भन्छन् – सबै निवेदन अस्वीकृत हुन्छ
‘ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले अस्वीकृत गर्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । निवेदन दिएको छु भनेर अवकाशका लागि पर्खेर कर्मचारी नबसे हुन्छ’
सरकारी निवासमा मन्त्री : शानसँग आउँछन्, भद्रगोल बनाएर जान्छन्
‘मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै शानसँग आउँछन्, छोडेर जाँदा सामान छरपस्ट बनाएर हिँड्छन् ।’
एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा लाग्यो ‘डिस्क ब्रेक’!
पार्टी एकीकरणका लागि बनेको कार्यदलका धेरै नेता मन्त्री भएपछि एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रकृयामा ‘डिस्क ब्रेक’ लाग्न पुगेको छ ।
​संसद बाहिरका चित्रबहादुर केसी : डेराको बास, ढिँडोको गास !
काठमाडौं, चैत ७ – पेचिलो र ठट्यौली कुरा गर्न खप्पिस नेता हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी ।
घरबाटै चकटी बोकेर स्कुल जान्छन् विद्यार्थी
विद्यालयमा विद्यार्थीलाई बस्नका लागि बेन्च र डेस्क नहुँदा समस्या भएको छ ।
खाडीचौर–चरिकोट सडकको विजोग, तामाकोशी आयोजना प्रभावित
दोलखा चैत ७ – सिन्धुपाल्चाकको खाडीचौरको उकालो लागेदेखि नै सुरु हुन्छ ट्रक र ट्रेलरको विजोग । पहाड चढ्नकै लागि बनाइएका जीप पनि बल्ल बल्ल चल्ने बाटोमा १२ पांग्रेदेखि ४०/४२ पांग्रे ट्रेलर कसरी चलिरहेका छन्, बटुवा नै अचम्म पर्छन ।
मुहार फेर्दै त्रिशूली नदी
त्रिशूली नदी अतिक्रमण बढ्दै जाँदा तथा नदी किनार वरिपरि अवैधानिक र अव्यवस्थित तरिकाले बालुवा धुने उद्योगहरु संचालनमा रहदा मध्य हिउँदमा समेत त्रिशूली नदी धमिलो बग्ने गरेको थियो ।
प्रदेश ५ः मन्त्रिपरिषद विस्तार
बुटवल, चैत ५ – प्रदेश नं ५ मा सरकार गठन भएको झण्डै एक महिनापछि आज दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।
रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउन मिल्छ ?
टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी भएको अभियोगमा जेल चलान गरिएका रेशम चौधरीले सांसदको शपथ खान मिल्छ ? अदालतले त मिल्दैन भनिसक्यो ।
​सरकारी निवासमा मन्त्रीको बसाईं सराई, चार मन्त्रीलाई पुगेन ठाउँ
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तार भएपछि ललितपुर पुल्चोकमा रहेको मन्त्री निवासमा पनि चहलपहल सुरु भएको छ ।
ओलीको आशालाग्दो टोली ! पूरा गर्लान् त बोली ?
काठमाडौं, चैत ४ – संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको मुख्य जिम्मेवारीका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको महिना दिन भएको छ ।
बेलढुङ्गा : जहाँबाट देखिन्छन् आँखै अगाडि हिमशृङ्खला (फोटोफिचर)
प्रताप बानियाँ/उज्यालो । म्याग्दी, चैत ४ – घना वनजङ्गलको बीचमा बेल आकारको ढुङ्गा । दाँयाबायाँ भिरालो जमिन । सिरसिर बतास चलिरहने डाँडा । चिरबिर, चिरबिर कराइरहने चराचुरुङ्गीको आवाज आँखै अगाडि सेताम्मे हिमालको सुन्दर दृश्य । घण्टौंसम्म बसिरहन मनलाग्ने भकिम्लीको बेलढुङ्गा । वरिपरीबाट सप्तरङ्गी डाँडाकाँडाले घेरिएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ मा पर्ने भकिम्लीको गाउँभन्दा माथि रहेको बेलढुङ्गाबाट मनोरम हिमशृङ्खलाका साथै दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । समुन्द्री सतहदेखि २ हजार सात ...
घरमा रेडियो बन्द गर्न नजान्ने सुनिता बनिन् रेडियोकर्मी
घरबाट बाहिर निस्कन आँट गर्न नसक्ने तराई मधेशका महिलाका लागि महोत्तरीकी सुनिता कुमारी महतो एक सफल उदाहरणीय पात्र बन्नुभएको छ ।
काठमाडौं, चैत ४ – शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभयो ।
मकवानपुर र चितवनको सिमानामा रहेको लोथर खोलामा तीन वटा एक्साभेटरले ढुङगा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन् गरेर विना रसिद एक करोड २० लाख रुपैयाँ अवैधानिक तरिकाले संकलन गरेको छ ।
शव नपाएको पीडाले भक्कानिँदै आफन्त
काठमाडाैं, चैत ३ –चारपाँच दिनदेखि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज धाइरहेका हरिशरण पौडेललाई अहिले न दिन न रात सबै एउटै जस्तै छ ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरु कसले के भने ?
काठमाडाैं, चैत २ - शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका मन्त्रीहरुले भावी कार्यक्रम र योजनाहरु सार्वजानिक गरेका छन् । समग्रमा उनीहरुले विकास र समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।
‘मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेलाई यौन व्यवसायी ठान्छन्’
शुसिला र सोफियालाई समाजले गर्ने व्यवहार उस्तै छन् । दुवैजनालाई काम सकेर राती घरपुग्दा घरबेटीदेखि छिकेकीले अनेकौ कुरा काट्छन । ‘डान्सबारमा नाच्ने केटी छिछि भन्छन्, घरबेटीले बस्न नदिएर चार ठाउँमा त कोठा सरिसके,’ सोफियाले समस्या सुनाउनुभयो ।
ओलीसँगै सिंहदरबार छिर्न खोजेका फोरम र राजपाको आ–आफ्नै स्वार्थ
संविधान जारी भएपछि पानी बारबार जस्तै अवस्थामा रहेका एमाले र मधेशवादी दलबीचको सम्बन्ध घनिष्ट बन्दैछ ।
​विराट कोहलीको फोटो हटाएर आईसीसीले ट्वीटरमा राख्यो नेपाली खेलाडीको फोटो
आईसीसीले नेपालले कसरी एक दिवसीय मान्यता हात पार्न सफल भयो भन्ने कथा मात्रै लेखेको छैन, नेपालको सफलतामा उसले आफ्नो अफिसियल ट्वीटर पेजको कभर फोटो नै चेन्ज गरेको छ ।
​घट्यो मोदीको लोकप्रियता, परे विपक्षीको घेराबन्दीमा
गोरखपुर तथा फूलपुरको चुनावी नतिजा भारतीय जनता पार्टीका लागि एउटा ठूलो धक्का हो । किनभने यी क्षेत्रबाट उसको मुख्यमन्त्री तथा उप–मुख्यमन्त्रीले एक लाखभन्दा बढी मतान्तरले जितेका थिए ।
टु जिरो कोडबाट अवतरण गर्नु नै गल्ती भयो : वरिष्ठ पाइलट लिम्बू
‘उत्तरतर्फबाट ल्याण्ड गर्न विशेष तालिम लिएका र अनुभव भएकाहरुलाई मात्र सम्भव छ, नयाँहरुले उत्तरबाट ल्याण्ड गर्नै सक्दैनन् र हुँदैन पनि ।’
जन्ममितिको विवादले सर्वोच्चका न्यायाधीश नै विवाजित भएपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिन्छन् कि बिदामा बस्छन् भन्ने अड्कलबाजी भएपनि उहाँ आफैं अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदले पदमुक्त गर्छ भन्ने कल्पनासमेत कसैले गरेका थिएनन् ।
महान वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । फ्र्याङ्क हकिङ र इसोबेल हकिङका छोरा हुन् स्टेफेन । स्टेफेनमा बुवा अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयमा मेडिसिन अर्थात औषधि क्षेत्रका विद्यार्थी थिए भने उनकी आमा इसाबेला साहित्य, राजनीति र अर्थशास्त्रकी विद्यार्थी थिइन् ।
काठमाडौंका सडक बेहाल भएको खबर अब नौला हुन छाडे । बरु तिनै सडकमा हरेक दिन नौला नौला दुर्घटना भैरहेका छन् । कहिले सडकका भेलले बालबालिका बगाउने, कहिले सडकका भ्वाङमा कार फस्ने अनि कहिले ढलभित्र खसेर मान्छे हराउने ।
सात वर्षसम्म विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाउनुभएको छ, सुकबहादुर कुलु (नेपाली)ले ।
नेपालकै सपना बनेको हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्गको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
नर्क जाने बाटो त अहिलेसम्म कसैले देखेका छैनन् । तर पौराणिक गन्थ्रका आधारमा यसो विचार गर्ने हो भने काठमाडौंका धेरै सडक ‘नर्क’ जाने भन्दा राम्रा छैनन् ।